Dawuniloda i-Firefox Firefox Privacy Notice
Agasti 26, 2015
I-Mozilla iyabunakekela ubumfihlo bakho. Uma i-Firefox OS ithumela ulwazi kithi, Inqubomgomo Yethu Yobumfihlo ye-Mozilla ichaza ukuthi siluphatha kanjani lolo lwazi.
I-Firefox OS ixhuma kithi nabanye ukuze inikezele ngezici zomkhiqizo.
Izibuyekezo: Ukuze izigcine isesikhathi samanje, i-Firefox OS ixhuma ngokuzenzakalelayo kusevisi esetshenziswa noma engxenyeni nomkhiqizi wedivayisi yakho. I-Firefox OS futhi ithumela ngokuzenzakalelayo ukuhlola kwezibuyekezo ukufaka izinhlelo ngokuthumela isicelo ku-Firefox Marketplace noma, uma ufake uhlelo kusuka kwenye indawo, lawo masevisi kanjiniyela wohlelo.
Indawo: Uma uvula amasevisi wendawo, i-Firefox OS ingasebenzisa amaphoyinti wedatha amaningi nokungenayo ukucabangela indawo yakho, kufaka phakathi i-GPS, AGPS nabanye abanikezeli besevisi yendawo. Ungakhubaza amasevisi wendawo kuhlelo le-"Izilungiselelo" ze-Firefox OS kudivayisi yakho. Funda kabanzi mayelana nemigomo yomhlinzeki wesevisi we-AGPS.
Ukusebenzisa kokuqala: Ukuze unikezele ngezibuyekezo eziqondile nezinhlelo, i-Firefox OS ithumela i-Mozilla idatha yesikhathi esisodwa uma iqaliswa kokuqala. Funda kabanzi
Ukusetshenziswa kohlelo: Ukuze uthuthukise ukutholakala kokuqukethwe ku-Firefox Marketplace, i-Firefox OS ithumela "Ulwazi Lokusebenza Kohlelo" (isb., isikhathi sokusebenza esisebenzayo, ukubalwa kokuvula/ukuvala/ukusaphazeka, uhlu lwezinhlelo ezifakiwe kumadivayisi we-Firefox OS) ku-Mozilla. Ungakhubaza ukwabelana Kolwazi Lokusebenza Lohlelo kuhlelo “amasethingi” we-Firefox OS kudivayisi yakho. Funda kabanzi
Ulwazi Oluhlinzekwa Inini Yosesho: Ukuze uthuthukise useho kumadivayisi we-Firefox OS, i-Firefox OS ithumela ulwazi ku-Mozilla mayelana nokuthi iyiphi injni yokusesha enikezele ngemiphumela kudivayisi. Ungakhubaza ukwabelana kolwazi lomphumela wosesho yenjini yokusesha kuhlelo “amasethingi” we-Firefox OS kudivayisi yakho. Funda kabanzi
Idivayisi oyisebenzisayo, njengamadivayisi amaningi weselula, idalwa izinhlangano ezimbalwa. Lesi saziso siphatha kuphela ukuthi i-Mozilla iluphatha kanjani ulwaz laho ngezinguqulo ezisemthethweni ze-Firefox OS ezigunyazwe i-Mozilla.
Uma usebenzisa izihlelo ezenziwe ngomunye hhayi i-Mozilla, izinqubomgomo zabo zobumfihlo zizosebenza.
I-Firefox OS ikuvumela ukuthi usebenzise amasevisi aqinisiwe ambalwa wezinkampani zangaphandle, njengomhlinzeki wakho nge-imeyili noma zomphakathi. Inqubomgomo yobumfihlo yalawo masevisi izosebenza uma uwasebenzisa.
Language Language Afrikaans عربي Български বাংলা Čeština Dansk Deutsch Ελληνικά English Español (de España) Eesti keel فارسی suomi Français עברית हिन्दी (भारत) Hrvatski magyar Bahasa Indonesia Italiano 日本語 Македонски မြန်မာဘာသာ Norsk bokmål Nederlands Polski Português (do Brasil) Română Русский slovenčina Slovenščina Српски தமிழ் ไทย Türkçe Tiếng Việt isiXhosa 中文 (简体) 正體中文 (繁體) isiZulu